hoy ny filohan’izy ireo, Harinaivo Rasamoelina. Io siansa io no mametraka ny karazana vinam-piarahamonina mifanaraka amina fotokevitra iray. Izy koa no mamaritra ny lalana hakana fahefana mba hahafahana manatanteraka ny vina voapetraka. Siansa mitaky fomba fiaina, fomba fisaina ary fomba fiasa maty paika ny politika. Tsy politika ny lainga fa lainga. Tsy politika ny halatra fa halatra. Tsy politika ny famitaham-bahoaka fa famitaham-bahoaka. Tsy politika ny kolikoly fa kolikoly. Vitsy ny mpanao politika marina eto amintsika. Vitsy ny olona mifototra sy miaina amin’ny ampahany betsaka ny atao hoe fotokevitra. Vitsy fa misy. Anjarantsika no mandalina sy manaraka ny toe-draharaha. Anjarantsika ny mametraka ny mpitondra antsika araka ny fotokevitra sy vina, hoy hatrany ny DHD.